Ị pụrụ ịbụ a DVD kpatụ aka gaa na ọrụ na kwesịrị gbanwee a dị iche iche software n'ihi ihe ụfọdụ, ọ ga-abụ incompatibility, ọhụrụ atụmatụ ma ọ bụ ụfọdụ ihe ndị ọzọ mere. Ị pụrụ ịbụ nnọọ ihe ọhụrụ nye DVD e kere eke software, nke DVD kpatụ aka gaa bụ oké ihe atụ nke. Ị pụrụ ịbụ ebe a n'ihi na ị na-eche ihe DVD creators bụ.
Isiokwu a ga-enyere gị aka ịmụta ihe DVD Onye Okike software-eme na nke software ị kwesịrị ị na-atụle.
Gịnị bụ DVD kpatụ aka gaa?
DVD kpatụ aka gaa bụ ihe nile-na-otu DVD e kere eke software. Ọ ga-ekwe ka ị na-ụdị nile nke video faịlụ na-na PC gị na, na tọghata ha na ọkụ ha jidesie a DVD maka nchekwa ma ọ playback on n'ụlọ gị gị na sinima usoro.
Gịnị mere i kwesịrị a software na agbanyeghị?
DVD kpatụ aka gaa dị ukwuu n'ihi na ọ na-atọghata faịlụ site na a dịgasị iche iche nke dị iche iche formats, na-enye ohere playback na ọtụtụ DVD ebre ngwaọrụ. Ọ na-nwere ọtụtụ atụmatụ nke bụ nnọọ ihe ọma, karịsịa na-ewere ya bụ freeware.
Otú ọ dị, ụfọdụ ndị nwere ike na-enweghị mmasị na interface. Ma ọ bụ, ha nwere ike mkpa a ọzọ mma ọgaranya usoro. Ma ọ bụ, ha nwere ike-eburu a dị iche iche software ruru ndakọrịta mbipụta. Isiokwu a na-iji depụta iri uzo ozo n'ihi na mgbe ị ike ma ọ bụ na-agaghị enweta DVD kpatụ aka gaa na-arụ ọrụ. Ndepụta a bụ yana idobe okirikiri nke Apple software maka ndị na-agba ọsọ Mac OSX usoro, nakwa dị ka Windows dabeere usoro dị ka mma. Anyị na-depụtara ọ bụla software sistemụ arụmọrụ na isiokwu nke ya ngalaba.
Nkebi nke 1:-atụ aro DVD kpatụ aka gaa ọzọ
Part 2: The top 10 DVD kpatụ aka gaa ọzọ
Wondershare DVD Creator A maara nke ọma dị ka ihe dị mfe iji ma dị ike DVD Onye Okike nke nwere ike ọkụ gị videos, audios na ihe oyiyi na n'elu 40 wuru na-DVD menus ike a pụtara DVD. Na ugbu a na ọ bụ n'ụzọ zuru ezu dakọtara na Windows 10.
Akwado os: Windows 2003 / XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10, Mac OS X 10.11 (El Capitan), 10.10, 10,9, 10,8, 10.7, 10.6
1. DVDStyler (n'ihi na Mac OS)
DVDStyler bụ a kediegwu DVD kpatụ aka gaa ọzọ n'ihi na ọ enye gị ohere ike menus. Ọ gụnyekwara ndebiri pụtara na gị DVD menus ga anya ọma, ọbụna ma ọ bụrụ na unu enweghị video edezi ihe ọmụma.
2. Disko (N'ihi na Mac OS X 10.4.3+)
Disko bụ ihe ọzọ na oké DVD kpatụ aka gaa na Alternative maka OS X nke na-enyere na-ere ọkụ DVD. Ọ na-nwere a n'ezie mfe iji interface, na a dịgasị iche iche nke atụmatụ dị ka na-aga aga na dị ka.
3. iSkysoft DVD Creator (E Nwere maka Mac / Windows)
Nke a bụ oké niile-nzube DVD burner nke ga-ekwe ka i mee ihe fọrọ nke nta ihe ọ bụla ị ga-mkpa. Ọ na-atụmatụ a mara mma nifty wuru na-nchịkọta akụkọ nke ga-ekwe ka ị iri na-agbanwe gị video faịlụ n'ihu na-ere ọkụ ha ka ha a DVD.
LiquidCD bụ a n'ezie mfe ma kensinammuo mpempe software nke ahụ bụ maka Mac OSX usoro (na oké DVD kpatụ aka gaa na Alternative). Ọ bụ adọkpụ - na nke a bụ anya drawback - Otú ọ dị, ọ na-eme ka elu maka nke a (fọrọ nke nta) na ọtụtụ formats ya nwere ike ijikwa - ya mere ma ọ bụrụ na ị nwere vidio ndị na-na a weird format, ị pụrụ ịhụ na ọ bụrụ LiquidCD nwere ike Enyemaka.
5. DeVeDe (n'ihi na Windows)
DeVeDe bụ nke mbụ Windows dabeere DVD kpatụ aka gaa na Alternative anyị na depụtara. Ọ bụ na-ama maka inwe ike ime ihe niile a DVD Onye Okike software ga-enwe ike ime.
Otú ọ dị, nke a adịghị abịa na-enweghị ya njọ. Ọ na-eme ihe a dị mfe kọmputa ọrụ ga-atụ anya ya ime - na nnọọ nta ọzọ. Ị nwere ike ghara ike ọkachamara DVD meus na nke a software, na atụmatụ set dị nta. Ọzọkwa, e nwere ihe ọzọ nsogbu; ọ bụ a Windows software, ma ọ bụ dakọtara na niile nsụgharị nke Windows, otú ị ga-aga na saịtị ahụ na ego ndakọrịta tupu ị wụnye.
6. VobBlanker (n'ihi na Windows XP, Vista, 7, 8)
VobBlanker bụ bit nke a niche operating software - ya-enye gị na-arụ ọrụ VOB faịlụ, gụnyere-agba ha niile ọmụma ha ugbu a nwere - ihe atụ hardcoded ndepụta okwu ị na-adịghị mkpa. N'ihi nke a, ọ bụ a na-ghar mpempe software, ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị na-agụ ga-enwe mma chi na a ubé obere kpọmkwem DVD Onye Okike software.
7. BurnX (n'ihi na Mac OS X)
BurnX bụ oké DVD Onye Okike software, n'ihi na n'adịghị ihe ọ bụla ọzọ na ndepụta a, ọ na-ekwe maka nwa oge e kere eke nke DVD. Kama nke na-eke a na-adịgide adịgide apa ọkụ ka diski, software-enye gị ohere ihichapu, akpali ma dezie faịlụ na DVD. Nke a bụ karịsịa kemfe ma ọ bụrụ na ị na-eji gị DVD dị ka a ndabere maka data dị ka megide a nkiri ọkpụkpọ.
Avi2DVD bụ a DVD kpatụ aka gaa na Alternative na dị ukwuu n'ihi na ndị na-amaghị ọrụ - Ọ nwere ihe incredibly mfe interface, nke pụtara na m na ị na chọrọ ịrụ mfe DVD e kere eke aga-eme, Avi2DVD bụ ihe na eleghị anya ị ga-ahụ ezigbo. Otú ọ dị, ọ bụ kwụsie ike bụ a drawback. Na anyị ọrụ ule, anyị na-ahụ mgbe ụfọdụ ọ na-adịghị arụ ọrụ dị ka bu n'obi.
CDBurner XP bụ oké DVD Onye Okike freeware - ya akpan akpan ike ịbụ ikike ike audio CD si na otutu egosipụta. Na kwuru na ọ nwere otutu nhọrọ na ọtụtụ dị iche iche ngwa.
Ọ bụrụ na ị na-achọ a bit ọzọ ike gị DVD Onye Okike - ka ihe atụ, ị chọrọ ike a DVD na i nwere ike buut si - na ndị ọzọ okwu, ndabere gị dum sistemụ - mgbe ị na-aga na-ahụ na a software bụ eleghị anya otu nke kasị mma na ndepụta dị ka ọ nwere a nso nke atụmatụ dị ka na gụnyere. Kasị DVD creators abụghị maka ndị ọ dị mkpa na ike, n'ihi ya, na-agụnye nhọrọ.
Otú ọ dị, e nwere mmụta usoro a software, dị ka o nwere nnọọ mgbagwoju interface tụnyere ụfọdụ nke ọzọ DVD Ịmepụta software na anyị na-na-nwere na nke a ndepụta.
Nke a DVD Onye kere bụ nke zuru okè oke nke DVD kpatụ aka gaa na Alternative maka Windows n'ihi na o nwere ngwa ngwa arụmọrụ, ọ na-arụ ọrụ rụọ ọrụ nke ọma, na e nwere ọtụtụ ndị dị iche iche nhọrọ dị. Ọ na-eme nke a na-enweghị n'ịghagbu ọgwụgwụ onye ọrụ, n'agbanyeghị ma ọ bụ na ị chọrọ ike a dị mfe ndabere gị akwụkwọ ma ọ bụ a ọkachamara na-achọ DVD maka ụlọ gị sinima collection. Ọ bụ nhọrọ na-agụnye ikike tinye a ọdịnaya page, ndepụta okwu na isi utu aha.
> Resource> Alternatives> Iri DVD kpatụ aka gaa na Alternative Software Aro